वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या बढे संगै बढ्दैछ मृगौलाको रोगीहरु, मृगौला रोगको लक्षणहरु र बचाउने उपायहरु जान्नुहोस - Vision Nepal TV
वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या बढे संगै बढ्दैछ मृगौलाको रोगीहरु, मृगौला रोगको लक्षणहरु र बचाउने उपायहरु जान्नुहोस
Published: October 22, 2016 | 10:23 am | शनिबार, कार्तिक ६, २०७३ | ४८४० पटक पढिएको
मिर्गाैला गुमाउने अर्थात् चरण ५ को अवस्था अस्पताल आइपुग्नेमध्ये धेरै वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा काम गर्न गएका युवा देखिन्छन् ।
सिन्धुपाल्चोकका कुमार तामाङ दुबईको एक प्लास्टिक कारखानामा काम गर्थे । शिक्षण अस्पतालमा डायोलोसिसका लागि आएका उनले मिर्गाैला फेल भइसकेपछि मात्रै आफूले चाल पाएको बताए । आफ्नो साथी सर्कलमै सबभन्दा स्वस्थ आफू रहेको बताउने उनको केही महिनाअघि खुट्टा सुनिन थाल्यो । ‘केही दिन ठीक होला भन्दै काममै जोतिएँ । पछि कम्पनीले हस्पिटल लग्यो । अस्पतालले मिर्गाैला समस्या आएको बताएपछि कम्पनीले छुट्टी र नेपाल आउने टिकट दिएर पठायो । यहाँ चेक गरेको त मिर्गाैला फेल भइसकेछन्,’ उनले भने ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेकै समयमा मिर्गाैला फेल भएर आएका ८ जना अहिले पनि शिक्षण अस्पतालको बेडमा छन् । वीर अस्पतालमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु मिर्गाैलाको उपचार र परीक्षणका लागि आउनेको संख्या धेरै रहेको डा. बराल बताउँछन् । ‘केमिकल र रबर उद्योगमा काम गरेकाहरुमा मिर्गाैलाको समस्या देखिएको छ । तर, यही कारणले उनीहरुको मिर्गाैला बिग्रेको भन्न मिल्दैन,’ बराल भन्छन्, ‘पानीको मात्रा कम वा केमिकलको असर हुन सक्ने अनुमान गर्न भने सकिन्छ ।’
मिर्गाैला बिग्रिने मुख्य कारण मधुमेह र उच्च रक्तचाप हो । मधुमेह र उच्च रक्तचापका रोगी बढिरहेकाले मिर्गाैला रोगी पनि बढेको वीर अस्पतालका नेफ्रोलोजिस्ट डा. बराल बताउँछन् । ‘यी दुई रोगका कारण किड्नी फेल हुने सम्भावना धेरै हुन्छ,’ उनी भन्छन् । डायबिटिज र उच्च रक्तचापजस्ता रोग कम हुने ग्रामीण भेगका बासिन्दामा पनि एन्टिबायोटिक, पेन किलरजस्ता डाक्टरको सिफारिसबेगर पाइने औषधिको अत्यधिक प्रयोगले पनि किड्नी फेल हुन सक्ने उनले बताए ।
सामान्यतया जाँड, रक्सी, चुरोट, मासु आदि बढी खाने, तनाव लिने र व्यायाम नगर्ने व्यक्तिलाई मिर्गाैलाको समस्या देखा पर्न सक्ने डा बराल बताउँछन् ।
पहिले धेरै जना मिर्गौलाको जटिल समस्या आएपछि मात्रै अस्पताल पुग्ने गरेका थिए । मिर्गौलाको अवस्था थाहा पाउन गाह्रो नभए पनि बेला बेलामा स्वास्थ्य जाँच गर्ने बानी नभएकाले गम्भीर समस्या भएपछि मात्रै हस्पिटलमा पाइला टेक्ने धेरैको साझा बानी छ । तर, पछिल्लो समय भने आफ्नो मिर्गौलाको हालखबर जानिराख्न डाक्टरकहाँ आउने पनि बढेका छन् । ‘विश्व मिर्गाैला दिवस जस्ता सचेतनात्मक कार्यक्रम र आमसञ्चारले दिएको महत्वका कारण मिर्गाैलाको परीक्षण गर्ने बढेका हुन्,’ डा बराल भन्छन् । विशेषगरी कलेज पढ्ने विद्यार्थी दैनिक एक वा दुई जनाका दरले मिर्गाैला चेक गराउन आउने उनले जानकारी दिए ।
के हुन् लक्षण, के हो कारण ?
मिर्गाैला रोगका अनेक लक्षण छन् । तीमध्ये केही स्पष्ट जानकारी दिन लक्षण डाक्टरहरुले पहिल्याएका छन् । थकाइ र कमजोरीको महसुस हुनु, काममा कम ध्यान जानु, खानामा अरुचि, निदाउन कठिनाइ, राति खुट्टाको मासु गल्नु र फर्किनु, गोडा सुन्निनु, बिहान आँखा वरिपरि सुन्निनु, छाला सुख्खा हुनु र चिलाउनु, राति बढी पिसाब लाग्नु, रक्तअल्पता र महिनावारीमा अनियमितता यसका लक्षण हुन् । उसो त अरु समस्या देखिए पनि मिर्गाैलामा क्षति पुगेको वा नपुगेको परीक्षण गराउने बढेको डाक्टरहरु बताउँछन् । डा सिग्देल भन्छन्, ‘वर्षमा एकचोटि मात्रै भए पनि पिसाबमा प्रोटिन र रगतमा क्रियाटिनिन जाँच गरे मिर्गौलाको स्थितिबारे थाहा पाइन्छ ।’
चिकित्सकहरूका अनुसार मिर्गौलामा समस्या देखिने मुख्यतः दुई कारण छन् । एउटा मृगौला आफैँभित्रको समस्या र अर्को शरीरका अन्य अंगमा लागेका रोगहरूका कारण । मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु, कलेजो, बिग्रेको अवस्थामा पनि मिर्गाैलामा असर गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तै मिर्गौलाको पत्थरी, ट्युमर, क्यान्सरजस्ता सर्जिकल समस्याले पनि मिर्गौला बिगार्न सक्छ । ग्लोमरुलोनेफ्राइटिस, पोलिसिस्टिक किड्नी डिजिज अर्थात् पानीको फोका देखिने रोगले पनि मिर्गौला खराब गर्छ ।
कसरी जोगाउने ?
डाक्टरहरूका अनुसार मिर्गौलालाई सुरक्षित राख्न धेरै सजगता अपनाउनुपर्छ । कम्तीमा वर्षमा एकपटक मिर्गौलाको चेकजाँच गर्नुपर्छ । तौल सन्तुलनमा राख्नु र रक्तचाप नियन्त्रण गर्नु मिर्गौला बचाउने उपाय हुन्् । औषधि प्रयोगमा सावधानी नअपनाउँदा पनि मिर्गौला खराब हुन सक्छ । सामान्य बिरामी हुँदा पनि औषधि प्रयोग गरिहाल्ने बानीले यो रोगको जोखिम बढेको डाक्टरको आशंका छ । स्वच्छ पानी प्रशस्त पिउन, नियमित व्यायाम गर्न, जाँडरक्सी तथा चुरोट, बिँडीबाट टाढा रहने, सन्तुलित आहार गर्ने बानी बसाल्न चिकित्सकहरू सुझाव दिन्छन् । परिवारका कुनै सदस्यलाई पत्थरी, मधुमेहजस्ता रोगको संक्रमण भएमा विशेष सजगता अपनाउनुपर्छ । डा. बरालका अनुसार शरीरको सञ्चालन प्रक्रिया मिर्गाैलाबिना सम्भव नै नहुने भएकाले समस्या देखिनासाथ उपचार खोजिहाल्नुपर्छ ।
फेल भएपछिका उपाय
मिर्गाैलाले दिनभरिमा करिब १ सय ८० लिटर रगत फिल्टर गर्नुपर्छ । तिनमा भएको डेढदेखि दुई लिटर पानी मिर्गाैलाले मूत्रनलीमा पठाउँछ भने बाँकी रगत र पानी शरीरभरि फैलाउँछ । मिर्गाैलाले यसो गर्न नसकेको खण्डमा त्यो बिग्रिएको वा फेल भएको भन्ने बुझिन्छ । मिर्गाैला फेल भइसकेपछि बिरामीसँग तीनवटा विकल्प हुने वीर अस्पतालका डा. बरालले बताए । एउटा विकल्प हेमोडायलाइसिस हो । दोस्रो पेरिटोनियल डायलाइसिस र तेस्रो विकल्पचाहिँ प्रत्यारोपण हो । हेमोडायलाइसिस भनेको मिर्गाैलाले गर्ने सारा काम मेसिनद्वारा गराइनु हो । पेरिटोनियल डायलाइसिस बिरामी आफैँले गर्न सक्छन् । तर, यो विधि नेपालमा खासै प्रयोगमा आउन सकेको छैन । प्रत्यारोपण भनेको चाहिँ मान्छेको शरीरमा नयाँ मिर्गौला राख्ने विधि हो । प्रत्यारोपण गर्दा शल्यक्रियामार्फत स्वस्थ मानिसका दुइटामध्ये एउटा मिर्गौला झिकेर बिरामीको शरीरमा हालिन्छ । सरकारी अस्पतालमा त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुर र निजी अस्पतालमा कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भरपुरमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिन्छ ।
४८४१ Total Views ३ Views Today
← गणतन्त्रको मजाक गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय
नेपालमा पहिलो पटक TV White Space Technology र VHF Technology को परिक्षण: महाविर पुन →
यस्तो टाउको दुखाई खतरनाक हुन सक्छ
चिसो मौसममा दैनिक लसुन खानुस् :यि हुन सात फाइदा
कोरिया आएका श्रमिक बिक्रम राईलाई क्यान्सर ,सहयोग गरेर जीवन बचाईदिन बिरामीको अनुरोध